20 Shaqooyin Oo Lacag Badan Keeni Kara 2022
Bogga ugu weyn 20 Shaqooyin Oo Lacag Badan Keeni Kara 2022
Kahor intaadan shaqo qaadan, waa inaad samaysaa xoogaa tixgelin ah, miisaamaa xulashooyinkaaga, ka dibna aad go'aankaaga gaarto. Mid ka mid ah tixgelinnadan ayaa ah “inta shaqadu bixiso iyo haddii aad lacag badan ka samayn karto".
Sida laga soo xigtay Glassdoor, ku dhawaad ​​tobankiiba toban (68%) ayaa soo sheega in mushaharka iyo magdhowgu ay ka mid yihiin tixgelinnada ugu horreeya marka la go'aaminayo meesha laga shaqeynayo.
Hadda su’aashu waxay tahay:
Dadka run ahaantii doonaya inay kasbadaan jeeg weyn, shaqooyinkee ama mihnadaha ayaa bixiya mushaharka ugu sarreeya?
Laga soo bilaabo US News & World Report darajadii ugu dambaysay ee shaqooyinka ugu wanaagsan, shaqooyinka daryeelka caafimaadku waxay sii ahaanayaan shaqooyinka ugu mushaarka badan dalka.
Marka laga reebo waaxda daryeelka caafimaadka, waxaa jira shaqooyin ka jira warshadaha iyo beeraha si fiican u bixiya.
Maqaalkan, waxaan ku baran doonnaa mid kasta oo ka mid ah shaqooyinkaas mid ka mid ah uu lacag badan ka samayn karo, waxa xirfadleyda mihnaddu sameeyaan iyo shuruudaha gelitaankooda ugu yar.
Waa kuwee Shaqooyinka ama Xirfadaha ugu Lacagta Badan?
Halkan waxaa ah 20ka ugu sarreeya shaqooyinka lacag -abuurka ee kugu kasban kara lacag caddaan ah oo wanaagsan:
Qalliinnada Caafimaadka Afka iyo Maxillofacial
Dhakhtarka dhalmada iyo dumarka
Dhakhaatiirta qanjirka 'prostodontist'
Kalkaaliye caafimaad Kalkaaliye caafimaad
Cudurka loo yaqaan 'Podiatrist'
Maareeyaha Hawlaha Ganacsiga
Waxaan eegi doonnaa shaqooyinkan laga bilaabo kuwa ugu mushaharka yar ilaa kuwa ugu sarreeya. Sidoo kale, ogow in celceliska mushaharka halkan lagu bixiyay uu yahay sida lagu arkay Warbixinta CNBC.
#20 Maareeyaha Hawlaha Ganacsiga
Inaad raacdo xirfad ahaan maareeyaha hawlaha meheradda waa hubaal inay ku heli doonto lacag aad u badan. Maareeyayaasha hawlaha meheraddu asal ahaan waxay u tagaan dadka meheradda ku jira. Waxay ka caawiyaan waaxyo kala duwan oo ka tirsan shirkad isku -duwaha si loo gaaro yoolka dhammaadka.
Dhab ahaantii, meherad kastaa iyagaa u baahan, yar iyo weynba, iyadoon loo eegin warshadaha. Shaqada maamulayaasha hawlaha ganacsiga waxaa ka mid ah shaqaalaysiinta dadka, gorgortanka qandaraasyada, wax ka qabashada arrimaha miisaaniyadda, fahamka hawlaha guud ee ganacsiga, iyo hagidda kooxaha shaqada mashaariicda.
Mushaharka celceliska: $ 123,880 sanadkiiba
Ugu Yar Waxbarashada loo baahan yahay: Shahaadada Bachelor-ka
#19 Maareeyaha Iibka
Iyada oo ah gacanta hagta kooxda wax iibisa, maareeyayaasha wax iibintu waxay lacag badan ka helaan shaqadooda. Waxay toosiyaan qaybinta badeecadaha shirkadooda macaamiisha, taas oo ku lug leh sameynta dhulal wax -iibsi iyo sidoo kale dejinta qoondo iyo yoolal.
Maareeyayaasha iibku waxay soo bandhigaan barnaamijyada tababarka shaqaalaha, waxay horumariyaan xeelado kooxda iibku u shaqeeyaan si hufan, waxayna ku riixaan xubnaha kooxda inay ka tallaabsadaan bartilmaameedyada iibka muddada gaaban iyo muddada fog.
Sidoo kale, maareeyayaasha iibku waxay si dhow ula shaqeeyaan waaxda suuqgeynta si ay u aqoonsadaan macaamiisha cusub kooxda wax iibintu ay beegsan karto.
Mushaharka celceliska: $ 140,320 sanadkiiba
Field: Iibka iyo suuqgeynta
Waxbarashada Ugu Yar Ayaa Loo Baahan Yahay: Shahaadada Bachelor-ka
Qareenku waa xirfadle ruqsad haysta oo la taliya kana wakiil ah dadka, ganacsiyada, iyo hay'adaha dawladda arrimaha sharciga.
Asal ahaan, qareenadu waxay si gaar ah ugu shaqayn karaan shirkadaha waaweyn ama dhaqammada yaryar, ama waxay si guud ugu shaqayn karaan dawladda. Qaybta dawladda, qareenadu waxay shaqooyin ka heli karaan qareennada degmada ama difaacayaasha dadweynaha. Sidoo kale, waxay u shaqayn karaan dowladda federaalka.
Dhinaca kale, qaybta gaarka loo leeyahay, qareeno badan ayaa shaqo ka raadsada shirkado waawayn, halkaas oo ay inta badan dooran doonaan aag takhasus u leh sida sharciga deegaanka ama canshuuraha, furiinka, ama asturnaanta xogta.
Hadda in kasta oo mushaharku kala duwanaan karo iyada oo ku xidhan nooca sharciga aad ku dhaqantaan, mushaharka dhexdhexaadku aad buu u sarreeyaa si uu xirfad ahaan u noqdo qareen mid ka mid ah shaqooyinka lacagta ugu badan ka sameeya Ameerika.
Mushaharka celceliska: $ 144,230 sanadkiiba
Field: Adeegyada bulshada
Waxbarashada Ugu Yar Ayaa Loo Baahan Yahay: Shahaadada dhakhaatiirta
XIDHIIDHKA: Muxuu Ula Jeedaa Shaqaalaha Ka Reeban: Saamaynta, Sida Uu U Shaqeeyo
Akhri ALSO: 10 Shaqooyinka Heerka Gelitaanka Lacag-bixinta ugu sarreeya ee 2022
Duuliyeyaashu waxay asal ahaan u duulaan oo u shaqeeyaan diyaaradaha sida diyaaradaha iyo helikobtarrada diyaaradaha, shirkadaha gaarka loo leeyahay, hay'adaha fulinta sharciga, iyo milatariga. Waxa kale oo ay diyaarsadaan diyaaradda duulimaadka waxayna hubiyaan in diyaaradu isku dheelitiran tahay oo ka hooseyso xadka culeyska.
Xirfadda duuliyenimada waa hubaal faa'iido leh maadaama ay ka mid tahay shaqooyinka ugu mushaharka badan.
Mushaharka celceliska: $ 147,200 sanadkiiba
#16 Maareeyaha Maaliyadda
Maareeyayaasha maaliyadeed ayaa mas'uul ka ah kormeerka dhaqaalaha shirkadaha waaweyn, wakaaladaha, iyo wax kasta oo u dhexeeya. Waxay isku dubbaridaan xisaabinta waxayna soo saaraan warbixinnada maaliyadeed, bayaannada socodka lacagta caddaanka ah, iyo saadaasha faa'iidada xubnaha kooxdooda
In kasta oo maareeyayaasha maaliyadu ay wajahayaan suuqa shaqada ee tartanka ah, ahaanshaha mid ayaa lacag badan kaa dhigi kara. Sidoo kale, maareeyayaasha maaliyadeed oo iyagana maareyn kara maaliyadda caalamiga ah iyo adduunyada sii murugsan ee aaladaha maaliyadeed iyo dammaanad -qaadyada, oo ay ku jiraan kuwa wax -soo -saarka, ayaa noqon doona kuwa ugu suuqa badan.
Mushaharka celceliska: $ 146,830 sanadkiiba
Akhri ALSO: Qaabka Sharaxaada Shaqo ee La Taliyaha Maaliyadeed ee 2022
#15 Maareeyaha Suuqgeynta
Adduunka wax iibsiga iyo iibinta, maareeyayaasha suuqgeyntu waxay leeyihiin masuuliyadda ogaanshaha qiimaha, si ay uga caawiyaan ururrada inay sare u qaadaan faa'iidadooda. Waxa kale oo ay hubiyaan in macaamiisha shirkaddu ay ku qanacsan yihiin, qiimeeyaan baahida loo qabo badeecadaha iyo adeegyada shirkadda iyo sidoo kale inay go'aamiyaan suuqyada suurtogalka ah ee alaabtaas.
Shaqo ahaan maareeyaha suuqgeynta ayaa hubaal faa'iido leh maadaama ay tahay mid ka mid ah xirfadaha lacagta ugu badan sameeya.
Mushaharka celceliska: $ 147,240 sanadkiiba
#14 Dhakhtarka indhaha
Takhaatiirta dhakhaatiirta ayaa si fudud u ah dhakhaatiir baara oo daweeya xaaladaha cagaha iyo canqowga, oo ka bilaabma ciddiyaha soo baxay iyo baalasha ilaa anqawyada jabay iyo lafaha. Daaweynta halkan waxay u noqon kartaa mid fudud sida qorista kabaha lafaha ama mid aad u dhib badan marka la sameeyo qalliinka maqaar -galaha oo dhan.
Dhakhtarka lugaha, waxa hubaal ah in aad samaynayso lacag badan.
Mushaharka celceliska: $ 148,220 sanadkiiba
Goobta: Daryeelka caafimaadka
Ugu Yar Waxbarashada loo baahan yahay: Shahaadada dhakhaatiirta
ARAG SIDOO KALE: 15 Iskuulada Ugu Fiican Ciyaaraha Dunida | 2022 Darajo
13. Maamulaha IT
Maareeyayaasha teknolojiyadda macluumaadka ((IT)) waa hageyaasha ka caawiya ururrada inay maraan shaybaarka mar walba is-beddelaya ee ah teknolojiyadda casriga ah.
Mushaharka celceliska: $ 152,860 sanadkiiba
#12 Injineerka Batroolka
Xirfadda injineer batroolka aad ayay faa'iido u leedahay. Xaqiiqdii, waxay hadda ka mid yihiin 20ka shaqadood ee ugu sarreeya mushaharka dhexe ee ugu sarreeya sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka.
Asal ahaan, injineerka batroolka (oo sidoo kale loo yaqaan injineerka gaaska) ayaa go'aamiya habka ugu wax ku oolka badan ee loo qodo loona soo saaro saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ceel gaar ah.
Mushaharka celceliska: $ 156,370 sanadkiiba
#11 Kalkaalisada suuxinta
Xirfadlaha kalkaalisada suuxinta suuxdintu waa nooc kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan oo weliba aad lacag badan ka samayn karto.
Asal ahaan, kalkaaliyayaasha suuxinta waxay la shaqeeyaan bukaannada ku saabsan daaweynta suuxinta ka hor, inta lagu jiro, iyo qalliinka ka dib, iyo sidoo kale daaweynta ama hababka kale ee caafimaad ee isticmaala suuxdinta.
Mushaharka celceliska: $ 174,790 sanadkiiba
Field: Daryeelka caafimaadka
Ugu Yar Waxbarashada loo baahan yahay: Shahaadada Masterka
XIDHIIDHKA: Waa maxay Caddaynta Dakhliga? Waa maxay dukumentiyada loo baahan yahay 2022
Fiiro gaar ah: Sida laga soo xigtay Golaha Aqoonsiga Barnaamijyada Waxbarshada Kalkaaliyeyaasha Kalkaalinta Naafada Kalkaalinta leh, laga bilaabo Janaayo 1, 2025, dhammaan barnaamijyada kalkaalisada kalkaalisada ee USA waa inay ku abaalmariyaan shahaadada dhakhtar gelitaanka kalkaalisada suuxinta.
#10 Dhakhtarka ilkaha
Guud ahaan, Dhakhaatiirta ilkuhu waxay aqoonsadaan oo daweeyaan dhibaatooyinka ku saabsan bukaanka afkiisa, ciridka, iyo ilkaha.
Waajibaadkooda waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn soo saarista ilkaha, xidhidhiyaha ilkaha, iyo buuxinta godadka. Qaarkood si kastaba ha ahaatee waxay doortaan inay ku takhasusaan meelaha u dhexeeya daaweynta dhibaatooyinka afka ee halista ah iyo cudurrada ilaa toosinta ilkaha iyo samaynta qaliinka afka.
Mushaharka celceliska: $ 175,840 sanadkiiba
#9 Dhakhtarka Caruurta
Sida dhakhaatiirta kale, dhakhaatiirta carruurtu waxay kasbadaan mid ka mid ah mushaharka ugu sarreeya USA. Dhakhaatiirta carruurta ayaa si fudud u ah dhakhaatiirta carruurta; waa dhakhaatiir ka welwelsan fayoobaanta jirka, shucuurta, iyo bulsheed ee carruurta laga soo bilaabo carruurnimadooda ilaa qaangaarnimada.
Iyadoo aan loo eegin inay tahay takhasus laftiisa, dhakhaatiirta carruurtu waxay kaloo leeyihiin noocyo hoosaadyo fara badan oo u dhexeeya neonatology, oncology, iyo hematology ilaa korriinka-dabeecadda carruurta iyo maskaxda.
Mushaharka celceliska: $ 183,240 sanadkiiba
#8 Dhaqtarka qanjirka 'prostodontist'
Aad bay uga duwan yihiin dhakhaatiirta ilkaha, Prosthodontists waa dhakhaatiir ilkaha oo soo celiya oo beddelaya ilkaha si loo hagaajiyo shaqada afkaaga ama muuqaalka dhoolla -caddayntaada.
Waxay asal ahaan daaweeyaan dadka ilkaha ka maqan, ee qaniinyadooda dhib ku qaba ama aan jeclayn dhoollacaddayntooda. Intaa waxaa dheer, waxay caawiyaan bukaanada kansarka ee dhib ku qaba cunista, wada xiriirka, ama xitaa dhunkashada daaweynta kadib.
Helitaanka shaqo sida prosthodontist -ka waa mid aad u faa'iido badan maadaama aad kasban doonto lacag aad u badan inta aad ku hormarineyso xirfaddaada.
Mushaharka celceliska: $ 191,400 sanadkiiba
Dhakhaatiirtu waxay baaraan oo daaweeyaan dhaawacyada ama jirrooyinka. Waxay baaraan bukaanada; qaado taariikhda caafimaadka; u qor daawooyinka; oo dalbo, fuliyaan, oo tarjumaan imtixaannada ogaanshaha. Sidoo kale, waxay inta badan kala taliyaan bukaanka cuntada, nadaafadda, iyo daryeelka caafimaadka ka hortagga.
Dhab ahaantii, waa dhakhtarka aan wacno shantii daqiiqoba mar. Tan waxaa loola jeedaa in takhaatiirta ay noqdeen tirooyin aad muhiim ugu ah nolol maalmeedkeena.
Maadaama ay yihiin kuwo la qiimeeyo, ku raadinta xirfadda hubaal waa wax lagu daray maadaama aad kasban doonto lacag badan.
Mushaharka celceliska: $ 196,490 sanadkiiba
#6 Dhakhtarka maskaxda
Dhakhaatiirta cilminafsiyeedka waa takhaatiir baaraya, daaweeya oo ka shaqeeya inay ka hortagaan cilladaha la xiriira maskaxda iyo caafimaadka maskaxda. Waxay ku takhasusaan ogaanshaha iyo daawaynta xaaladaha caafimaadka dhimirka sida niyad-jabka, schizophrenia, walaaca, ADHD, iyo khalkhalka cunto.
Sida xirfadlayaal caafimaad oo kale, dhakhaatiirta dhimirka ayaa ka mid ah kuwa lacagta ugu badan ka sameeya shaqadooda.
Mushaharka celceliska: $ 220,380 sanadkiiba
Post laxiriira: Sideen Ku Noqon Karaa Dhakhtarka Maskaxda? Dugsiyada, Xirfadaha, Qiimaha & Mushaharka
#5 Dhaqtarka lafaha
Orthodontists waa khabiir ku takhasusay ilkaha oo ku daaweeya dhibaatooyinka qaniinyada aan habboonayn iyo ilkaha weyddiista. Asal ahaan, waxay baaraan bukaanka afkiisa iyo daamankiisa si ay u naqshadeeyaan barnaamij ilkaha ah oo loogu talagalay ujeeddada laba-laab ah ee ka caawinta bukaannada inay gaaraan oo ay ilaaliyaan daamannada shaqada ee habboon halka ay sidoo kale dhammaystiraan dhoollacaddayntooda.
Dhakhaatiirta lafaha hadda waa mid ka mid ah xirfadlayaasha ilkaha ee lacagta ugu badan ka hela shaqadooda.
Mushaharka celceliska: $ 225,760 sanadkiiba
#4 Dhakhtarka dhalmada iyo dhakhtarka dumarka
In kasta oo dhakhaatiirta dhalmadu ay dunida ku soo kordhiyaan nolol cusub, dhakhaatiirta dumarka waxay daryeelaan baaxadda caafimaadka taranka haweenka. Yacni, dhalmadu waa beerta qalliinka ee ka shaqaysa dhalmada, halka dhakhtarka dumarku uu yahay qaybta dawooyinka ee khuseeya caafimaadka haweenka, gaar ahaan caafimaadkooda taranka.
Waxaa hubaal ah inaad lacag badan kasban doonto haddii aad shaqo ka bilowdo dhakhtarka dhalmada iyo dhakhtarka dumarka.
Mushaharka celceliska: $ 238,320 sanadkiiba
#3 Qalliinka Afka iyo Maxillofacial
Dhakhaatiirta qalliinka afka iyo maxillofacial ayaa asal ahaan qalliinno ka sameeya wejiga, afka, iyo daanka. Xirfadlayaashan waa dhakhaatiirta ilkaha oo leh ugu yaraan afar sano oo tababar qalliin oo dheeraad ah. Markaa, waxay samayn karaan wax walba laga bilaabo daweynta dhaawacyada wajiga ilaa hagaajinta bushimaha dillaacsan. Waxay kaloo ogaan karaan oo daweyn karaan bukaanka qaba kansarka madaxa, qoorta, iyo afka.
Dhakhaatiirta afka iyo Maxillofacial waa xirfadlayaasha caafimaadka ee lacag badan ka sameeya shaqadooda.
Mushaharka celceliska: $ 242,370 sanadkiiba
Dhakhaatiirta qalliinka ayaa qalliin ku sameeya bukaannada si loo daweeyo dhaawacyada, sida lafaha jabay; cudurrada, sida burooyinka kansarka; iyo cilladaha, sida dillaacyada dillaaca.
Asal ahaan, xirfadlayaashan waxay u tababari karaan inay noqdaan dhakhaatiir qalliin guud, ama waxay dooran karaan takhasus, sida lafaha, neerfaha, wadnaha, ama qalliinka caagga ah.
Dhakhtar qalliin ahaan, waa inaad u diyaargarowdaa mar walba waxaa jira culeys xagga geeska ah. Iyadoo la tixgelinayo tan iyo in ka badan, ka shaqeynta takhasuska qalliinka waa u qalantaa maadaama dadka halkan jooga ay lacag badan ka helaan shaqadooda.
Mushaharka celceliska: $ 255,110 sanadkiiba
ARAG SIDOO KALE: 20 Shaqooyin oo bixiya $ 40 saacad ilaa aad ka daasho
#1 Dhakhtarka suuxinta
Dhakhaatiirta suuxinta ayaa ka hela lacagta ugu badan ee dhanka caafimaadka. Dhab ahaantii, hay'adaha kala duwan ee darajooyinka iyo warbixinnada tirakoobka ayaa ku tallaabsaday inay yihiin shaqooyinka ama shaqooyinka ugu mushaharka badan.
Hadda, waa kuwee Dhakhaatiirta Suuxinta?
Dhakhaatiirta suuxinta ayaa ah dhakhaatiirta ka masuulka ah maamulka suuxdinta guud ama gobolka, taas oo u oggolaanaysa dhakhaatiirta qalliinka iyo dhakhaatiirta kale in ay dhammaystiraan hab -raaca soo -noqnoqoshada iyada oo aan wax dhib ah u lahayn bukaanka.
Waxa kale oo ay si dhow ula socdaan calaamadaha muhiimka ah ee bukaanka iyo hawlaha nolosha muhiimka ah ka hor, inta lagu jiro, iyo qalliinka ka dib - samaynta go'aanno degdeg ah oo ku saabsan xog xaddidan marka loo baahdo.
Si loo muujiyo sida ay muhiimka u tahay xirfaddan, in ka badan 150 sano ka hor, midkood - suuxintii ugu horreysay - ayaa lagu ammaanay "hadiyadda ugu weyn ee abid loo sameeyo bani'aadamnimada silica."
Mushaharka celceliska: $ 267,020 sanadkiiba
Haddii aad tahay arday dugsi sare ah oo aan weli dooran waddada xirfadda ama qalin-jabiyaha doonaya inuu sii wato darajada labaad, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso shaqooyinka kor ku taxan gaar ahaan, haddii lacagtu tahay tixgelintaada asaasiga ah ee doorashada xirfadda.
Waxaan rajeynayaa inay tani kaa caawin doonto habka go'aan qaadashadaada.
Dib -u -eegista Ibotta: Ibotta Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Waa maxay Farxaddayda Dheemanka? Habka ugu Wanaagsan ee Loo Iibiyo Faraantiga Dheemanka
Dib -u -eegista Deynta PayPal: Qiimaha, Astaamaha, Sharci ahaan ama Fadeexad
Goobaha lagu Iibiyo Dahabka Dahabka ah ee Online -ka ah ee loogu talagalay Bidhka ugu sarreeya
Hel Koodhadhka Lacagta Lacagta ee PayPal ee Bilaashka ah Tallaabooyin yar sannadka 2022 | Hagaha buuxa
Faallooyinka Lenda Mortgage 2022: Sida ay u Shaqayso | Ma Xalaal Baa Mise Waa Khiyaamo Cusub Oo Daynta Ah
Ardayda kulliyadaha maanta waxaa saaran cadaadis aad uga badan kuwii ka horreeyay. Waxa ay juglaynayaan dugsiga oo kaliya balse shaqada...
20 Shaqooyin Bixiya $ 50 Saacad | In kabadan $ 100 / Maalin
Shaqooyinka mushahar yar ayaa noqon kara daal gaar ahaan haddii aad haysato biilal badan oo aad ku dejiso iyo qoys…
Kalkaalisiintu waa xirfad la yaab leh oo loogu talagalay dadka jecel, naxariista, xiiseeya cilmiga caafimaadka, oo u heellan…
Shaqooyinka dibedda ah haddii aad tahay fuliye, milkiile ganacsi yar, ganacsade, ama nin ganacsade ah…
Shaqooyinka qandaraasku hadda waa maalinta kale ee macnaha in qalin-jabiyayaashu ay hadda door bidaan inay si madaxbannaan u shaqeeyaan…
15ka Fikradood ee Hadiyada Valentine ee ugu sareysa
20ka fikradood ee hadiyadaha ugu fiican ee qofka la jecel yahay ee karantiil
15-ka ugu sarreeya ee hadiyadaha maqaarka ee isaga
15 Fikradaha Hadiyada ee Maroodiga Cad ee Wacan ee Carruurta
15 Fikradaha hadiyadda Kirismaska ​​ugu Fiican ee saaxiibkaa: wuu jeclaan lahaa kuwan